အညတရအကျဉ်းသားရဟန်းတော်များ (၁၄) ဆရာတော် အရှင်သုမင်္ဂလလင်္ကာရ | MoeMaKa Burmese News & Media
၁၉၉၀ ခုနှစ်က ပတ္တနိကုဇ္ဇနသပိတ်မှောက်ကံဆောင်ပွဲမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ဆရာတော်တွေအများအပြား န၀တစစ်အစိုးရရဲ့မတရားဖမ်း ဆီးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်တွေထဲမှာ ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင် ဆရာတော်တပါး ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီဆရာတော်ကြီးက တော့ ရန်ကုန် မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်က ဆရာတော်အရှင်သုမင်္ဂလလင်္ကာရဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေးမှာသံဃာတွေသပိတ်ကံဆောင်တော့ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ သံဃာတော်တွေလည်း ခြောက်ထပ်ကြီးဘုရားဝင်းအတွင်းမှာ သပိတ်ကံ ဆောင်ဘို့ စီစဉ်ကြပါတယ်။ သပိတ်ကံဆောင်သင့် မဆောင်သင့်ကို မန္တလေးသံဃာထုက ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလထံသို့ စာ ရေး ဆက်သွယ်မေးမြန်းလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်အခါတုန်းကဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလက သူ့ရဲ့သဘောထားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဆွမ်းလောင်းပွဲမှာ ရဟန်းတော်တွေကို သေနတ်နဲ့ပစ်တဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံ၊ ပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ပုံတွေအတွက် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံ ဆောင် ထိုက် မဆောင်ထိုက်ဆုံးဖြတ်ပေးဘို့ ဘုန်းတော်ကြီးဆီကိုစာလာကပ်ကြပါတယ်။ ဘုန်းကြီးဆီ စာရောက်တာကို ထောက်လှမ်းရေးကသိတော့ အရှင်ဘုရား ဖြစ်နိုင်ရင် စာမပြန်ပါနဲ့။ ပြန်မယ်ဆိုရင်လည်း မဆောင်ထိုက်ဘူးလို့ပြန်ဖြေပေးပါလို့ လျှောက်ကြပါတယ်။ ဘုန်းကြီးက ဒကာတို့ သတိပေးတာ ကျေးဇူးတင်တယ်။ သို့သော် ဘုရားစကားကိုသာ ဘုန်းကြီးနားထောင်ရလိမ့်မယ်။ တရားတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းသာ ကျမ်း တတ်ဘုန်းကြီးတပါးအနေနဲ့ ဖြေရပါလိမ့်မယ်လို့ ဘုန်းကြီး ပြန်လည်မိန်ကြားပါတယ်။ ကံဆောင်ထိုက်ကြောင်း အဆုံးအဖြတ် စာတမ်းရေးပြီး ရဟန်းပျိုအဖွဲ့တွေထံကို ဘုန်းကြီး ပြန်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ မကြာပါဘူး။ ဖမ်းတာပါပဲ။ အဖမ်းခံရမယ်ဆိုတာ ဘုန်းကြီးသိပြီးသားပါလို့ ထောင် ကထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်း ရင်းနှီးတဲ့တပည့်ဒကာတယောက်ကို မိန့်ကြားဘူးကြောင်းကြားသိရပါတယ်။
ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလလင်္ကာရဟာ မြန်မာနိုင်ငံက တိပိဋကဘွဲ့ရ ဆရာတော် ၁၂ ပါးအနက် လေးပါးမြောက်ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ သက်တော် ၂၇ နှစ်အရွယ်မှာ ပိဋကတ်သုံးပုံကို ရေးဖြေ နှုတ်ဖြေ နှစ်မျိုးလုံး အောင်မြင်တော်မူတဲ့အတွက် တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋ က ကောဝိဒဘွဲ့တော်နှစ်မျိုးရခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဖြစ်သလို အမရပူရ (တောင်မြို့) မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်၊ ကျမ်းပြုအကျော် ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသရဲ့တပည့်ရင်းတပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
တိပိဋကဓရဘွဲ့တံဆိပ်ရတဲ့နှစ်မှာဘဲ ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေး မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်ကိုတည်ထောင်တော်မူပြီး တပည့်သံဃာတော်တွေ ပရိယတ္တိစာပေများသင်ကြားပို့ ချပေးပြီး ကျမ်းစာများပြုစုကာ သီတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူပါတယ်။ ပတ္တနိကုဇ္ဇနကံဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆရာတော်ရဲ့တပည့်တပါးလည်းဖြစ်ပြီး ယခုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာသီတင်းသုံးနေတဲ့ ဆရာတော်တပါးကလည်း အောက်ပါအတိုင်း ပြောပြဘူးပါတယ်။
မန္တလေးမြို့မှာ ဆရာတော်သံဃာတော်တွေအစိုးရကိုသပိတ်မှောက်ကံဆောင်နေကြပြီ။ သံဃာဆိုတာ ညီညွတ်ရမယ်။ သံဃာအဆက်ဆက် ညီညွတ်ခဲ့လို့ ဒီနေ့တိုင်အောင် သာသနာတော်တည်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ မန္တလေးသံဃာက အစိုးရကို သပိတ်မှောက်ကံဆောင်ပြီး ရန်ကုန် သံဃာက သပိတ်မမှောက်ကံမဆောင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် သံဃာညီညွတ်ရေးပျက်ပြားလိမ့်မယ်။ သံဃာညီညွတ်ရေးကို ရှေးရှုပြီးတော့ သာသနာ အတွက် တာဝန်ကျေရမယ်လို့ မိန်တော်မူတယ်။
တဆက်ထဲဘဲ အင်းစိန်ရွာမ တိုက်အုပ်ဆရာတော် ဦးတိလောက၊ ရွှေဘုန်းပွင့်ဆရာတော်၊ ကျောက်ကုန်းမေဒိနီ ဆရာတော်စသောထင်ရှား သောဆရာတော်များကိုပင့်ဖိတ်ပြီး ဆရာတော်က ဥက္ကဌ၊ အင်းစိန်ရွာမ တိုက်အုပ်ဆရာတော်က အတွင်းရေးမှူးတာဝန်ယူကာ စစ်အစိုးရကိုသပိတ်မှောက်ကံဆောင်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပေးပို့ခဲ့တယ်။
တပည့် စာချဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုစေလွှတ်ပြီး ခြောက်ထပ်ကြီးဘုရားမှာ န၀တစစ်အစိုးရကို သပိတ်မှောက်ကံဆောင်စေခဲ့တယ်လို့ ပြောပြ ပါတယ်။ ရန်ကုန်မန္တလေးကသံဃာတော်တွေရဲ့ သပိတ်မှောက်ကံဆောင်မှုကြောင့် စစ်တပ်အတွင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ ဘာသာရေးရေးအခမ်း အနားတွေကို သံဃာတော်တွေက ဆောင်ရွက်မပေးတော့တဲ့အတွက် စစ်တပ်အတွင်းမှာ မပြေလည်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ သပိတ် မှောက်ကံဆောင်ပြီးမကြာခင် သာသနာရေးဦးစီးဌာန ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်လည်းဖြစ်၊ ဆရာတော်နဲ့ စာသင်ဘက်ငယ်သူချင်းလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးအံ့မောင်ကိုယ်တိုင် တိပိဋကဓရဆရာတော်ကြီး အရှင်သုမင်္ဂလာလင်္ကာရကို လာရောက်တွေ့ ဆုံပြီး အောက်ပါအတိုင်းလျောက်ထားခဲ့ပါတယ်။
“အရှင်ဘုရား လက်မှတ်ထိုးပြီး သပိတ်ကို ပြန်လှန်ပေးတော်မူပါ။ တပည့်တော်မှာ ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့ပါဘူးဘုရား။ ဒီကိစ္စကို ဗိုလ် ချုပ်ခင်ညွှန့်ကိုယ်တိုင်ကိုင်နေတာ။ တပည့်တော်အနေနှင့်တာဝန်ပေးလာလို့ အရှင်ဘုရားကိုဖမ်းရတော့ပါမယ်ဘုရား” လို့လျှောက်ထား ကြောင်း သိရပါတယ်။
တိပိဋကဓရဆရာတော်ကြီး အရှင်သုမင်္ဂလာလင်္ကာရမှ ပြန်ပြီးမိန့်တော်မူတာက “အံ့မောင် ငါဝိနည်းကို ဖျက်တာမဟုတ်ဘူး။ ၀ိနည်းနှင့် အညီလုပ်တာ။ အမျိုးသာသာ သာသနာအတွက် ငါ့အနေနှင့် အလျှော့မပေးနိုင်ဘူး။ မင်းလုပ်ရမယ့် မင်းအလုပ်ကို မင်းဆက်သာလုပ်ပါ” လို့ သာသနာ့အာဇာနည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက မိန့်ခဲ့ကြောင်း ဦးအံ့မောင်ရုံးမှာ ရုံးကိစ္စတွေလုပ်နေတဲ့သံဃာတော်တွေက တဆင့်သိခဲ့ရ ပါတယ်။ ဒီသတင်းအပြင်ပေါက်ကြားလိုဆိုပြီး အဲဒီရုံးထိုင်တဲ့သံဃာတော်တွေကိုပါဖမ်းဆီးပြီး အင်းစိန်ထောင်ကိုပို့လိုက်ကြောင်း အင်းစိန် ထောင်မှာအတူနေခဲ့ရတဲ့ ထောင်ထွက်နိုင်ငံရေးသမားတယောက်က ပြန်ပြောပြပါတယ်။ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမှာရှိတဲ့သံဃာတော်တွေ သ ပိတ်မှောက်ကံဆောင်လိုက်တဲ့အတွက် စစ်တပ်အတွင်းပြဿနာတက်ရတော့မဲ့အခြေအနေဆိုက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ (၃)ရက်အတွင်း သပိတ်မလှန်ရင် ပြင်းထန်စွာအရေးယူမဲ့အကြောင်း ဆရာတော့်ထံ စာပို့လာပါတယ်။ စစ်အစိုးရအကြောင်းကိုသိတော်မူတဲ့ အရှင်သုမင်္ဂလရဲ့ ဆရာလည်းဖြစ်တဲ့ မန္တလေး မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်၊ သံတော်ဆင့်ဆရာတော်က လက်မှတ်ထိုးလိုက်ဘို့ ဖျောင်းဖျတော်မူပါတယ်။ ဆရာ့စကားကို မပယ်ရှားလို၍ သပိတ်လှန်ကြောင်းလက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ပေမဲ့ လက်မှတ်ထိုးပြီး နောက်တစ်နေ့ သံဃာတော်များဆွမ်းခံကြွချိန်မှာ စစ်အာ ဏာရှင်တွေက ကျောင်းတိုက်ကိုလာရောက်ပြီး ဆရာတော်အရှင်သုမင်္ဂလကို ဖမ်းဆီးခေါ်သွားပါတယ်။
ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလအဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းက ချက်ချင်းပြန့်နှံ့သွားပါတယ်။ ဆရာတော်ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့ကိစ္စအပေါ် မကျေနပ်မှုတွေ ပေါက်ကွဲထွက်လာကြမှာကို န၀တစစ်အာဏာရှင်တွေ အကြီးအကျယ်စိုးရိမ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာတော်ကို တရားရုံးမထုတ်ပဲ မျက်ကွယ်ရ မန်ယူစေခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်ကို ရုံးထုတ်တရားရင်ဆိုင်မဲ့နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့ ဘားလမ်း (စတီးဝပ်) အချုပ်ခန်းကို လူတွေအများအပြား လာ ရောက်စောင့်ကြည့်ကြပြီး အဲဒီထဲမှာ ဆရာတော်ကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့ န၀တအရာရှိတွေရဲ့ ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းက ဒကာ ဒကာမတွေ လည်း လာရောက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။
န၀တရဲ့ အထူးစစ်ခုံရုံးက ကံဆောင်သပိတ်မှောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတင်းအကျပ်ခြိမ်းခြောက်ဝန်ခံခိုင်းပြီး ထောင်ဒဏ်နှစ် (၁၀)ချမှတ်ခဲ့ ပါတယ်။ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် လူထွက်ကြောင်းလည်း အာဏာပိုင်တွေက လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပါတယ်။
“ဘုန်းကြီးကို အင်းစိန်ထောင်ကနေ မြစ်ကြီးနားထောင်ကိုပို့တော့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ထောက်လှမ်းရေးတွေက လမ်းတလျှောက်လုံး ကြိမ်း မောင်းလာပါတယ်။ မြစ်ကြီးနားထောင်ထဲ မပို့ခင် မြစ်ကြီးနားထောက်လှမ်းရေးတပ်မှာ ဘုန်းကြီးကို အရပ်ဝတ်အတင်းဝတ်ခိုင်းပြီး အရာရှိ လုပ်သူက စစ်တပ်ဟာ အမိန့်ရထားရင် ဘာမဆို လုပ်မယ်ဆိုတာသိသလားတဲ့။ သူတို့ပုံစံက ရိုက်နှက်နှိပ်စက်မဲ့ဟန်ပါပဲ။ ဘုန်းကြီးအား နာပါနကို တလျှောက်လုံးမှတ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘုန်းကြီး မုသားမပြောဘူး။ ကြောက်စိတ်ရှိသော်ငြားလည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပြင်နိုင်တဲ့အ ကြောင်း၊ ရဟန်းဘဝကိုစွန့်ဘို့ထက် အသက်ကိုသာစွန့်မဲ့အကြောင်း အာဏာရှင်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်လို့” ထောင်ကထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်း တပည့်ဒကာတဦးကို ပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ထောင်ထဲမှာ (၂) နှစ်ခွဲလောက်နေခဲ့ရပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ ဆရာတော်ထောင်က ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။ ချမှတ်ထားတဲ့ထောင်ဒဏ်နှစ်မပြည့်ခင် န၀တစစ်အစိုးရက ဆရာတော်ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်း နှစ်ခုထွက်ခဲ့ပါတယ်။
(၁) ရွှေဟင်္သာဆရာတော်ကြီးနဲ့ အခြားထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေက ဦးသုမင်္ဂလလို သာသနာ့အာဇာနည်တပါးကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထား တာဟာ သာသနာအတွက် အရုပ်ဆိုးလှတယ်။ မလုပ်ကောင်း၊ မပြုလုပ်ကောင်းကြောင်းပြောပြီး အစိုးရဆီမှာအလှူခံကြောင်း။
(၂) မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ပျံလွန်တော်မမူမီရက်ပိုင်းအလိုမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် ဆရာတော်ထံသွားရောက်ဖူးမျှော်ခဲ့ပြီး ဆရာတော်ကြီး ကိုကုသပေးနေတဲ့ သမားတော်ကြီး ဒေါက်တာဦးထွန်းတင်ကို ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုမေးမြန်းကြောင်း၊ ဆရာတော် ကြီးရဲ့အခြေအနေမှာ ရက်ပိုင်းအတွင်းပြန်လွန်တော်မူတော့မှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီအခါ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်က ဆရာတော်ကိုရှိခိုးပြီး ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ချင်သည့်ဆန္ဒကိုပြောပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်ဟု လျောက်ထားကြောင်း၊ ဆရာတော်ကြီးက အချက် (၃) ကို ရှင်းပြတောင်း ဆိုကြောင်း၊
(က) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကျယ်ချုပ်က ပြန်လွတ်ပေးရန်။
(ခ) သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိဿကို ပြည်ခွင့်ပြန်ပေးရန်။
(၈) တိပိဋကဓရဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလကို မြစ်ကြီးနားထောင်မှပြန်လွှတ်ပေးရန်တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
အဲဒီအခါ ဗိုလ်ခင်ညွှန့် က (က) အချက်ကို သူတာဝန်မယူနိုင်ကြောင်း (ခ) (ဂ) နှစ်ချက်ကိုတော့ တာဝန်ယူနိုင်တယ်လို့ လျောက်ထားခဲ့ကြောင်း၊ (က၊ခ၊ နှစ်ချက် ဒီနေရာနဲ့မသက်ဆိုင်လို့ ရှင်းမပြတော့ပါ)
ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးက တိပိဋကရတာချင်းအတူတူ ငါ့ကိုတော့ချီးမြှော်ပူဇော်ပြီး၊ ဦးသုမင်္ဂလကို ထောင်ချထားတာ ငါလုံးဝစိတ်မချမ်းသာဘူး။ မင်းတို့အပြစ်လို့ပြောပေမယ့် ငါ့အမြင်တော့အပြစ်မရှိပါဘူးလို့ဗိုလ်ခင်ညွှန့်ကိုရှင်းပြကြောင်း သိရပါတယ်။ မကြာခင်ဦးသုမင်္ဂလထောင်ကပြန်လည်မြောက်ခဲ့ပြီး ဦးဉာဏိဿရလည်း အင်္ဂလန်ကနေ မြန်မာပြည်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာ ခဲ့ပါတယ်။
ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလထောင်ကထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်း န၀တစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ ခပ်ဝေးဝေးနေခဲ့ပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အ ကျယ်ချုပ်ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အခါ ဆရာတော်ကို သွားရောက်ဖူးမြှော်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ ဆရာတော်ဆီကို န၀တအရာ ရှိတွေရောက်လာပြီး ဆရာတော်ရဲ့ကျောင်းတိုက်ကို တပ်မတော် ကြည်း၊ ရေ၊ လေမိသားစုကနေပြီး ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ဆေး ဆပ်ကပ် လှူဒါန်း ချင်ပါတယ်လို့ လာရောက်လျှောက်ပါတော့တယ်။ ဆရာတော်က ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပြည့်စုံပါတယ်။ အခြားလိုအပ်နေတဲ့ ကျောင်းတိုက်တွေ ကိုသာ သွားရောက်လှုဒါန်းကြပါလို့ ရိုးရိုးသားသား အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကိုဘဲ အာဏာပိုင်တွေက ဆရာတော်ဟာခေါင်းမာကြောင်း၊ အခုချိန်ထိ ကံဆောင်သပိတ်မှောက်နေတုန်းပဲဖြစ်ကြောင်း၊ ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံသတင်းတွေကို လူထုကြားထဲ အကြည်ညိုပျက်အောင် ၀ါဒဖြန့် ပါတော့တယ်။ ဆရာတော်ကို ကျောင်းတိုက်က ဖယ်ရှားဖို့အတွက် သာသနာရေးဦးစီးဌာနကနေ အာဏာစက်သုံးပြီး ခြိမ်းခြောက်ပြန်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာ ဆရာတော်ကျောင်းတိုက်ကို န၀တအတွင်းရေးမှူး (၁) ဖြစ်တဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွှန့်ကိုယ်တိုင် အရှက်မရှိ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးရောက်လာပါတယ်။ ဆရာတော်ကို ဦး (၃) ကြိမ်ချ ကန် တော့ပြီး (၅) ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်လှုဒါန်းတာတွေ၊ ဆရာတော်ကျောင်းတိုက်အတွက် ဘက်စုံမွမ်းမံရေးကော်မတီဖွဲ့ပြီး အလှူငွေကောက်ခံတာတွေလုပ်ပါတော့တယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကို န၀တပိုင်သတင်းစာ၊ ရုပ်မြင်သံကြားကနေလွှင့်ထုတ်ပြီး ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းသယောင် ကြော်ငြာကြပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက သာသနာရေးဝန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမျိုးညွှန့်က ပိဋကတ် (၃) ပုံ အာဂုံဆောင် နိုင်တဲ့သံဃာဆိုတာ အင်မတန်မှရှားပါးလှပြီး ပေါ်ပေါက်ရန်ခဲယဉ်းတဲ့အတွက်ကြောင့် ဘုရားငယ်တစ်ဆူပါပဲလို့ ဆရာတော်ကိုတင်စား ပြော ဆိုသွားတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ လိုတမျိုး မလိုတမျိုးတတ်လည်း တတ်နိုင်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေပါ။
စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ သူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ဆိုရင် ဘာသာ၊ သာသနာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလာလင်္ကာရနဲ့သံဃာတော်တွေအပေါ်မှာ ကျူးလွန်ခဲ့တာတွေ ကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။
ဆရာတော်ထောင်ကလွတ်မြောက်လာပေမဲ့လည်း ထောက်လှမ်းရေးက အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေဆဲပါ။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချူလာ လောင်ကွန် ရာဇ၀ိဇ္ဇာလယတက္ကသိုလ်က ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူ (Ph.D) ဘွဲ့ ဆက်ကပ်ခံရစဉ်ကလည်း စစ်အစိုးရက ဆရာတော်ကို သံသယမကင်းဘူးဆိုတာသိသာပါတယ်။
“ထိုင်းနိုင်ငံ ချူလာလောင်ကွန်တက္ကသိုလ်က စာတစောင်ရောက်လာတယ်။ ဘုန်းကြီးရေးလိုတဲ့ ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာတမ်းတခုကို ပါဠိချည်း သက်သက် ရေးပို့ဖို့ လျှောက်ထားတာပါ။ ဘုန်းကြီး စာမျက်နှာလေးဆယ်ရှိတဲ့စာတမ်းကို ရေးပို့ပြီး မကြာခင်မှာ ဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်ကပ် တဲ့အကြောင်း စာရောက်လာပါတယ်။ ဒါကို အစိုးရက သွေးရိုးသားရိုးမှဟုတ်ပါ့မလားဆိုပြီး မယုံဘူးဗျာ”
“အဲဒီအခမ်းအနားကို လွှတ်မလိုလို၊ မလွှတ်လိုလိုနဲ့ နောက်ဆုံးကျမှ အစောင့်နဲ့တက်ခွင့်ရတယ်။ သူတို့ကတော့ ကပ္ပိယအနေနဲ့ လိုက်တာပါ ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အခမ်းအနားကျင်းပနေချိန်အထိ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ဆီကို အသေးစိတ်သတင်းပို့နေတာ ဘုန်းကြီးကြားနေတာပဲ။ ဘုန်းကြီးဘွဲ့အမည် ခေါ်ပြီး ဘွဲ့လက်မှတ်ကပ်ပြီးမှပဲ သူတို့စိတ်အေးသွားပုံပဲ”
၂၀၀၀ ခုနှစ်တုန်းကလည်း အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ ကမ္ဘာ့ဘာသာပေါင်းစုံညီလာခံကို ဆရာတော်ကြွတုန်းကလည်း စစ်အစိုးရ ရာဇမာန်ရှခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးက အမေရိကားရောက်ရင် ဘယ်သတင်းဌာနနဲ့မှ အဆက်အသွယ်မလုပ်ဘို့ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။
“ဘုန်းကြီး ဘာတတ်နိုင်မလဲ။ သူတို့က ဘယ်သတင်းဌာနနဲ့မှ စကားမပြောပါနဲ့လို့ မှာထားတယ်။ ဘုန်းကြီးတပါးတည်း ဟိုတယ်ခန်းမှာ ရှိနေ တုန်း ဟဲလို တပည့်တော်စိန်ကျော်လှိုင်ပါဘုရား။ တိပိဋကဆရာတော်ရှိပါသလားဘုရားဆိုတော့ ဘုန်းကြီး ဘယ့်နှယ်လုပ်လိမ်မလဲ။ အေး ဘုန်းကြီးပဲဆိုပြီး သူတို့မေးတာ သုံးလေးခွန်းဖြေလိုက်တယ်။ သာသနာရေးနဲ့သာပတ်သက်တယ်။ ပြန်လည်းရောက်ရော အစိုးရတဖွဲ့လုံး ခပ်တန်းတန်းဖြစ်ရော” လို့ မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။
ဘာသာရေးကိစ္စမှမဟုတ်၊ ဆရာတော်ရဲ့ ကျန်းမားရေးကိစ္စကိုတောင် အာဏာရှင်တွေက မရိုးမသားလုပ်ခဲ့တာပါ။ “ဘုန်းကြီးနေမကောင်း တာကို တာဝန်ရှိသူတွေကို အကြောင်းကြားတော့ ဆရာဝန်ကြီးတွေလွှတ်ပေးတယ်။ အဲဒီဆရာဝန်ကြီးတွေက “ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဗျာ” ဘုန်း ကြီးက ခံစားနေရသူဆိုတော့ သေချာစစ်ပါဦးပြောတော့လည်း မကြိုက်ကြဘူး။ ကိုယ့်စားရိတ်နဲ့ကိုယ်သွားမယ်ပြောတာတောင် မယုံလို့ထင် ပါရဲ့။ လွယ်လွယ်နဲ့ မလွှတ်ဘူး။ အကြိမ်ကြိမ်စစ်မေးပြီးမှ သွားခွင့်ရတယ်။ ဒီရောက်တော့မှ သေချာကြပ်မတ်စစ်ဆေးကြည့်တော့ ရိုးတွင်းခြင် ဆီကင်ဆာရောဂါဖြစ်မှန်းသိရလို့ ကုသပေးနေကြတာ။ ဗမာပြည်မှာဆို ဘုန်းကြီးသေလောက်ပြီ” တဲ့။
ဆရာတော်ရဲUကျန်းမာရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းဘုရင့်မိသားစုက တာဝန်ကျေလှပါတယ်။ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်က ဗိုလ်ချုပ် ၀ိချစ် ယာဒိပ်၏သတင်းပို့မှုကြောင့် ထိုင်းဘုရင်မိသားစုက ဆရာတော်ရဲ့ဆေးဝါးကုသစရိတ်အ၀၀ကို ထိုင်းဘတ်ငွေ ၃ သန်းခန့်အထိ အကုန် အကျခံခဲ့ပြီး ထိုင်းသာသနာပိုင်သာအသုံးပြုရတဲ့ သံဃာ့ဝဇီရဉာဏဆောင်မှာပင် ပြုစုကုသပေးပါတယ်။ ။မြန်မာအစိုးရကဘာမှတာဝန်မယူ။ ရှက်ဘို့ကောင်းလေစွ။ မြန်မာဆရာဝန်သမားတော်ကြီးများက ဘာမှမဖြစ်ပါဟု ဘာကြောင့်မှတ်ချက်ချခဲ့သည်မသိ။ ဆရာတော်ရဲ့ ကျန်း မာရေးအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံဆရာဝန်များက အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန် နိုင်ငံတို့ရှိ အနုဇီဝဓါတ်ခွဲခန်းအကူအညီနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားကုသ ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်း ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၄) ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ (၀၇း၃၅) နာရီတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်လေဆိပ်မှာ ဆရာတော် ဘ၀နတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူခဲ့ရပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်တွေလက်အောက်မှာ ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင် (တိပိဋဓရ) သာသနာ့အာဇာနည်ဆရာတော်တပါး မဆုံးရှုံးသင့်ဘဲ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာ ပါ။ တကယ့်ကိုဝမ်းးနည်းကြေကွဲစရာကောင်းလှပါတယ်။ ကြည်ညိုလေးစားစွာ ကန်တော့ပါတယ်ဘုရား။ ။
၁။ သံဃာ့ဂိုဏ်း မသင့်စေဘို့ (အရှင်တိက္ခဉာဏ)
၂။ ပိဋကတ်ဖျက်တဲ့ကြွက်စုတ် (နေလင်း)
၃။ မင်းဒင်ရဲ့သက်ခိုင် (မင်းဒင်)
၄။ အကျဉ်းထောင်တွင်း ဆရာတော်ကြီးများနှင့်သံဃာတော်များ သီတင်းသုံးရပုံ (ရဲမင်းထွန်း)
၅။ မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး၏တောင်းဆိုချက် (၃) ချက်။ ဒေါက်တာထူးထူး (The hotnews weekle သတင်းဂျာနယ်)
2 Responses to အညတရအကျဉ်းသားရဟန်းတော်များ (၁၄) ဆရာတော် အရှင်သုမင်္ဂလလင်္ကာရ
MKK on March 3, 2012 at 3:52 pm
please keep this article for future reference. to publish ‘ book’ etc. etc. for history. for whatever reason, it may be useful.
alittlebitbetterthanidiot on March 4, 2012 at 2:50 pm
Very suspicious case. The disease that claimed Sayadawgyi’s life was Bone Marrow Failure and Pancytopenia. One of the causes of this disease is Acute Bone Marrow Toxicity following exposure to Lead Poisoning and other possible cause is Low Dose Arsenic Poisoning. Very doubtful cause is they provide lead & Arsenic contaminated water during detention in Prison???? Only the culprits know exactly what happened.